Maxay Tahay Istaraatijiyadaha, Tabaha, iyo Kanaallada ay Waajihi karaan inay Suuqgeyaashu diirada saaraan sanadka 2017 | Martech Zone
Maxay Tahay Istaraatijiyadaha, Tabaha, iyo Kanaallada ay tahay inay Suuqyayaashu diirada saaraan sanadka 2017
Isniin, Janaayo 16, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Waxaan rajeynayaa inaan ku aqriyo faallooyinka ama beesheena waxaad diirada saareyso sanadka 2017. Hay'ad ahaan, waxaan ku jiidaneynaa jihooyin kala duwan laakiin diirada aan u heyno macaamiisha ayaa sii wadaya inaan wanaajinno qarash gareyntooda iyo inay bixiyaan badeecadaheena iyo adeegyadeena ay maalgashadeen. Faa'iidada aan u leenahay sida daabaca iyo wakaalad ahaanba waa inaan tijaabin karno waxyaabo dhalaalaya si loo yareeyo khatarta guud ahaan. Korsashada degdegga ah ee tikniyoolajiyadda suuqgeynta waa faa'iido… laakiin waa marka ay macno samaynayso.
Si lagaaga caawiyo inaad yareyso diiradaada, hubi infograafiga cusub ee MDG Advertising, 7 Qaraar kasta oo suuq geynaya waa inuu sameeyaa sanadka 2017. Waxay muujineysaa fikradaha iyo habab muhiim ah oo si fiican kuu dejin kara sannadka soo socda.
Waxaan daawanay sanad kale oo rajooyinkeena ah runtii halgan. Ma aysan haysan miisaaniyad ama kooxuhu inay si buuxda u xaqiijiyaan awooddooda suuqgeynta. Natiija ahaan, shaqada inteeda badan waxaa lagu dabaqay wixii ay ahaayeen fiicnaa ama wixii ay kari kareen TAXADIRI si ay madaxooda biyaha kor uga hayaan. Hal mitir oo muhiim ah oo aan aragnay in laga waayey rajo kasta waxay ahayd filasho waxa ay ahaayeen maalgashiga suuq geynta waa inuu noqdaa boqolkiiba inta daqliga guud. Taasi waa anshax weyn oo lagu maalgeliyo meheraddaada hadda, halkii laga dhigi lahaa goor dambe, markaa waad sii wadi kartaa inaad xawaareyso kobacaaga.
Istaraatijiyadaha Suuqgeynta, Xeeladaha, ama Kanaallada Diirada Saaraya 2017
Shakhsiyaadka, Maahan Kanaalada: kaliya 25% shaqaalaha shirkadu waxay leeyihiin istiraatiijiyad isdabajoog ah oo isdaba marin ah Diirada saar istiraatiijiyadaada safarka macaamiisha shaqsiyadeed iyo xisaabaadka ayaa kaa caawin doona inaad hagaajiso oo aad dhex gasho xeeladahaaga omni-channel. Suuq-geynta xisaabaadka (ABM) wuxuu sii wadaa wadida xeelado badan.
qalabaynta: 94% dadka suuqleyda ah ee otomatigga qaar ka mid ah barnaamijyadooda waxay sheegaan inay wanaajisay waxqabadka shirkadooda In kasta oo dariiqyada iyo istiraatiijiyaduhu ay sii adkaadaan, haddana ilaha suuqgeynta ee shirkadaha ayaa badanaaba sii yaraanaya. Xulashada kaliya ee suuqleyda ayaa ah inay eegaan tikniyoolajiyadda suuqgeynta si ay u maareeyaan una wanaajiyaan istiraatiijiyadooda suuqgeynta.
Content: 58% ka mid ah kuwa ugu wax ku oolka badan # B2B suuqleyda waxay leeyihiin istiraatiijiyad suuq geyn suuq geyn Ganacsiyadu waxay soo saarayaan tan aan la isticmaalin, aan la dareemin, iyo waxqabad hooseeya maalin kasta. Waxaan aad ugu talin lahayn in la horumariyo a maktabadda habka loo soo saaro waxyaabaha.
Nadaafadda Xogta: 24% xogta macaamiisha tafaariiqleyda ah ee macaamiishoodu waa khalad, celcelis ahaan Maaddaama shaqsiyeynta iyo mideynta khibradaha macaamiisha ee khadka tooska ah iyo khadka tooska ah ay noqdaan kuwa ay filayaan macaamiisha iyo ganacsiyada, xogta xun waxay noqon doontaa qodax dhanka shirkadaha badankood. Tani waa sababta dhufto ee xogta macaamiisha korsanaya.
Video: Waxaa jiray 20% koror ah tirada fiidiyowga khadka tooska ah laga daawaday 2016 Video ayaa si xawli ah u noqda dhexdhexaadiyaha ka kooban macaamiisha badan. Barashada xadhkaha fiidiyowga - sida sida maqal raqiis ah in ka badan fiidiyow xun - wuxuu muhiim u yahay iftiinka, qoraalka, iyo dhererka fiidiyowga.
Ammaanka: 29% dhammaan macaamiisha waxay iska ilaaliyaan ficillada qadka tooska ah sababo la xiriira amni darrada Aaminaaddu waa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee macaamiisha ama meheradda kaa helaya khadka tooska ah kana beddelaya rajada macmiil. Hubinta ay xogtu waa aamin waana la wadaagayaa talaabooyinka aad qaadayso si aad u hubiso waxyaabaha ay ka kooban tahay.
Shaacbaxaya Technologies: Sirdoonka Cilmiga ah waxaa loo saadaaliyay inuu labanlaabi doono heerka kobaca dhaqaalaha marka la gaaro 2035 iyo xaqiiqda Virtual-ka ee taraafikada Internetka ayaa la saadaalinayaa inay kordhaan 61 jeer sanadka 2020. Teknoolojiyaddan ayaa leh awood aan caadi aheyn oo lagu wanaajinayo safarka macaamiisha iyo kor u qaadista khibrada macaamiisha.
Tags: abmsuuq geynta xisaabtaqalabayntasuuqgeynta kanaalkamaktabaddaContent Suuqxogta macaamiishanadaafadda xogtatignoolajiyada soo ifbaxdasuuq-geynta suuqaammaankacontent contentsuuqgeynta fiidiyowga
10 Tilmaamood oo Muhiim u ah Suuqgeyaasha Ciyaaraha